Serous cystadenoma ye-ovary
Ukwenza i-cystic ovarian formations i-cysttic ovarian formations i-cystadenoma ene-smooth-curved of ovary. Olu lwakhiwo olulodwa okanye oluninzi olugciniweyo olugcwele umbane, olulinganayo ukusuka kwi-1 cm kunye no-30-35 cm. Ngobunzima obubuncinane bokubunjwa, lekhosi ayikhombisi, kunye nokukhula okubandezelekayo esiswini esingaphantsi kwesibindi, ukunyuka kwesisu ngesayizi. Xa kuhlolwa, i-round, elastic, ehambayo kunye neyobuhlungu ayifumananga ukuba kunzima ukuhlula kwi- cyst follicular nakwi-ultrasound - yinto ejikelezayo yombutho onqabileyo owenziwe kwi-ovary. Ukuba i-serous cystadenoma ye-ovary ifunyaniswa, ngoko unyango lwayo lusebenza kuphela, lulandelwa yinto yokufunda yakhe.
I-cystadenoma yamaphepha e-serous ye-ovary - yintoni na?
Olunye uhlobo olusisigxina lwe-cystic on the ovaries luyi- cystadenoma yamaphepha e-serous, ehluke kwi-granulation ehamba ngokugqithiseleyo kwi-lumen ye-cyst. Le ngqumbo isoloko iyancipha ibe yinto embi, kodwa ukukhula okucothayo okokuqala kungabangeli iimpawu kwaye kufunyanwa ngengozi.
I-Symptomatics ayifani naziphi na ezinye izibonakaliso ze-cysts, kodwa i-ultrasound, ngaphandle kohlobo lwe-cystic e-anehogen, lubonisa ukukhula kweparietal ngaphakathi kwe-cyst. Kungenakwenzeka ukuhlukanisa i-cystadenoma yamaphilisi enobungozi obuvela kwisifo esibi esingazange sihlolwe i-hertological examination kunye nokuhlolwa kwegazi kubaphambili. Kodwa kunye ne-cystadenoma yamapilisi enobunzima isuswa ngokukhawuleza, ekubeni ukubola kwayo ibe yindlala ebulalayo kwenzeka kuma-50% amacala.
Olunye uhlobo lweengqumbo ezinobungqingili yi-cycinenoma ye-mucinous, eyenziwa ngezinto ezinobumba. Ingqungquthela yamagumbi amaninzi, ahlala ekhula ukuya kuma-size angama-30 ukuya kuma-50 cm, unyango lwe-cyst lukhawuleza.
I-Serous adenocarcinoma yama-ovari
Ngokwehla kwe-serous papillary cystadenoma, enye i-tumor ingabonakala-i-serous cystadenocarcinoma ye-ovary, ebonisa yonke imiqondiso yenkqubo enobungozi-ngokukhula ngokukhawuleza, kubandakanyeka kumalungu angummelwane, iimpawu zokuxhatshazwa kunye neemastasti kwii-lymph nodes kunye nezitho ezikude kunye neenkqubo. Ukuxilongwa kwe-tumor kwenziwa nge-cytological okanye i-hertological examination, ngexesha apho iqondo lokwahlukana kweeseli zalo lichongiwe. Unyango luxhomekeke kwinqanaba le-tumor kwaye lunokukhawuleza, luyalondoloza okanye luphawu.
Ukubuyiselwa kwe-microflora yesini - iilwimi ezingcono, izilwanyana ezinokungqina
Indlela yokunqanda ukuphuma kwegazi?
Emva kwesondo, isisu esezantsi sibuhlungu
Ureaplasma kubasetyhini - okuqhelekileyo
Saline diathesis yeentso
ICrostus cervix uteri
Iimpawu ze-ovarian, iimpawu zonyango
Ukuxubusha komlomo wesibeleko
Ubisi bunyuke kwaye buhlungu
Ukuqeda isiqhelo kwabasetyhini
I-Ovarian Dysfunction - Izimpawu
I-Cystoma ye-oval - izizathu
I-Adenomyosis - unyango kunye nezilwanyana zabantu
Apho ukuhlangabezana nomnyaka omtsha 2018 - iingcamango ezifanelekileyo kunye neendawo zokubhiyozela
I-Shakira Theron ibonakale kwisambatho esigqityiweyo kwi-premiere yefilimu ethi "Blasting Blonde" eBerlin
Iibhola ezigqithisileyo 2013
I-Kalina ebomvu - izixhobo ezixhamlayo kunye nokuchasene
Indlela yokomeleza iindonga zemithambo yegazi?
Yintoni eyenza u-Nikolai uSinner?
Iimpawu eziwusizo ze-cashews
I-steamer eyakhelwe ngaphakathi
Uvavanyo lokungakhutshwa kwamanga
Amaholide kunye nenja elwandle
Indlela yokuvula ivenkile yokutya?
Imiqondiso evelele kaNovemba
Ukuhlanjululwa kweTarot yokukhulelwa
Isihlalo soTywala kufuphi nekati
Izithelo ezomileyo kunye nokunciphisa umzimba
Iinkqubo ze-Modular zokuhlala kwigumbi lokuhlala
Umthi womthi kunye neentsiba